Madaxda DF Soomaaliya oo Wada Qorshe ay ku diidan tahay Ciidamada Ethiopia ee Kismaayo tagay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Madaxda DF Soomaaliya oo Wada Qorshe ay ku diidan tahay Ciidamada Ethiopia ee Kismaayo tagay
Sida ay wardoon.net Xog ku heshay Saraakiisha iyo Ciidamada Ethiopia ee gaadhay Magaalada Kismaayo ee Xarunta Maamulka Jubbaland ayaa Magaalada Muqdisho waxay ka dhalisay,khilaaf circa isku shareeray xili DF Soomaaliya ay u diyar garoobaysa Shirka Magaalada Kismaayo iyo hawlaah la xidhiidh.
Sida ay sheegayaan Warar hoose Dowladda Soomaaliya ay wax darensan tahay in tagitaanka deg deg ah ee Ciidamada Ethiopia ay gaadheen Magaalada Kismaayo in ay tahay fulinta qorsheyaal ay wax iskagaga ogyihiin Axmed Madoobe iyo Ethiopia.
Madaxwayne Xasan ayaa hormuud ah Madaxda DF Soomaaliya ee ishordhiagay in Saraakiisha Ethiopia ee Kismayao gaadhay ay hordhac u yihiin muquuninta Wax ka soo baxaya Shirka Magaalada Kismaayo ee xarunta Maamulka Jubbaland ,wuxuuna Madaxwaynuhu Xidhiidho kala duwan la sameeyey Taliyeyaasha Ciidamada iyo Wasaarada Gaashaandhiga dalka,isaga oo sheegay in la hakiyo tagi taanka Ciidaamda Ethiopia ee Magaalada Kismaayo.
Sida la ogyahay tagitaanka Ciidamada Ethiopia ee Magaalada Ksimaayo,waxay timid Xili Madaxwaynaha Maamulka Jubbaland uu Magaalada Adis abab Socdaal kagag soo laabtay,Waxayna arintaas dhalisay tuhun wayn oo Madaxda DF Soomaaliya iyo Madaxwayneyaasha labada Maamul Goboleed Galmudug iyo K/Galbeed Soomaaliya galay.
Arintan oo xasaasiyadan abuurtay,ayaa Saraakiisha Ciidamada AMISOM Ee dalka Jooga laga wax laga waydiiyey,Waxayna Wasiirka Gaashaandhiga DF Soomaaliya u sheegeen Saraakiishu in qorshaha ay Ciidamada AMISOM Ethiopia ku tageen Magaalada Kismaayo uuna ahayn mid cad,Amisom ayna wali ka gaadhin go’aan.